कास्कीको माछापुच्छ्रेमा पहिरोमा पुरिएर तीन बालबालिकाको मृत्यु
प्रकाशित: शुक्रबार, साउन २, २०७७ ०८:३१
कास्की। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा आज बिहान पहिरोमा परी तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। वडा नम्बर ८ को खोराकोमुखस्थित पाखा भन्ने ठाउँमा स्थानीय प्रेमराज विकको घर बिहान करिब पौने ६ बजे पहिरोले बगाउँदा उनका दुईजना नाति १६ वर्षीय कुशल, १४ वर्षीय समिर र १६ वर्षीया नातिनी रेजिना विकको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए।
२ साउन २०७७ ०८:५८:००
विराटनगर : मोरङको केराबारी गाउँपालिका–७ मा बिहीबार राति कुलोमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा एक बालकको शव भेटिएको छ । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ घर भएका हर्कबहादुर लिम्बूको छोरा ३ वर्षीय वियन लिम्बूको पानी बगिरहेको कुलोमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा शव भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालले बताए ।
साउन १, २०७७ काठमाडौं : खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर महोत्तरीमा दुई बालिकाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा जिल्लाको भंगहा नगरपालिका–६ स्थित मजरा टोल निवासी रमदुला अन्सारीकी ७ वर्षीया छोरी जयनब खातुन र नइम अन्सारीकी ५ वर्षीया छोरी सहनाज खातुन रहेको प्रहरीले जनाएको छ। खाल्डोमा जमेको वर्षाको पानीमा नुहाउने क्रममा दुबै बालिकाको मृत्यु भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सिवाकोटीले बताए।
बैतडी — बैतडी प्रहरीले बलात्कारका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । आमालाई बलात्कार गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ परेका छन् । यस्तै, अर्को घटनामा छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बुवा पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सप्तकोसीले बगाएर ल्याएको दाउरा संकलन गर्ने क्रममा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–७ बस्ने एक बालक वेपत्ता भएका छन् । बराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित चक्रघट्टी इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक पाण्डव राजवंशीका अनुसार सप्तकोसी नदीले १४ वर्षीय अनिल बस्नेतलाई बगाएको हो । उनको खोजी कार्य भइरहेपनि हालसम्म फेला पार्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बैतडीमा सर्पको टोकाइबाट एक किशोरीको मृत्यु भएको छ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर-२ महाकालीकी १७ वर्षीय भागरथी चन्दको मृत्यु भएको हो।
लकडाउनमा बालबालिकाको अत्यासलाग्दो आत्महत्या : केही गंभिर प्रश्नहरु
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभाव अहिले पनि कायम छ । यसले मानव जीवनलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा दीर्घकालसम्मै असर पु¥याउने छाँट देखिन्छ । यो वैश्विक संकटबाट नेपाल अछुतो छैन ।
यसले आर्थिक÷सामाजिक क्षेत्रलाई जसरी छियाछिया बनाइरहेको छ त्यसैगरी मनोवैज्ञानिक समस्या पनि बढाइदिएको छ । कोभिड–१९ को संकट र त्रासादीले कुन तह र तप्कालाई बढी असर गरेको छ ? कुन वर्ग र उमेर समूहले यसको बढी मार खेपिरहेका छन् ? यस सम्बन्धमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ ।
लमजुङ — लमजुङका ३ वर्षीय एक बालकमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण देखिएको छ । उनी हाल काठमाडौं बस्दै आएको खुलेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार कोरोना संक्रमणले पारेको प्रभाव र संक्रमण भएका व्यक्तिबारे जानकारी दिने क्रममा लमजुङका एक व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएको जानकारी दिएको थियो । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट पहिलोपटक लमजुङका १ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
१३ वर्षीया बालिकालाई भारत लगेर बेच्ने दुईजना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरोले १३ वर्षीया बालिकालाई भारत लगेर बेच्ने दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
ब्यूरोको टोलीले ललितपुर महानगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिकालाई काम लगाइदिने भन्दै बेचबिखन गर्ने सिन्धुपाल्चोकका २२ वर्षीय कृष्ण मगर र २८ वर्षीय प्रवीन तामाङलाई पक्राउ गरेको हो ।
मन्त्री गुरुङको निर्देशनमा ६ बालकको उद्धार
काठमाडौं । भक्तपुरमा सडकमा भेटिएका ६ जना बालकको उद्धार गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) को समन्वयमा भक्तपुरको कमलविनायकबाट ५ जना र ठिमीबाट १ जना गरी ६ जना बालकको उद्धार गरिएको हो ।
मन्त्री गुरुङको निर्देशनमा लकडाउनका बीच ६७ बालबालिकाको उद्धार
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट दुई दर्जन बढि बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदको नेतृत्वमा ज्येष्ठ २६ गते अपरान्ह काठमाडौंको ठमेल, पुरानो बसपार्क र चावहिल चुच्चेपाटीमा बेवारिसे अवस्था भेटिएका २५ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनर्स्थापना केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिएको हो ।
छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुई बालबालिकाको मृत्यु
अन्न्पूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,६ जेठ, नुवाकोट ।
नुवाकोटका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ । तादी खोलामा डुबेर एक बालक र कुमरीमा लडेर एक बालिकाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ।
ईमेज खबरमा प्रकाशित,५ जेठ, काठमाडौं ।
पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले कोरोनाबाट आमा गुमाएका बच्चालाई ५० हजार सहयोग गर्ने भएका छन् । पूर्वमन्त्री बस्नेतले बच्चालाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक आहारका लागि ५० हजार रकम सहयोग गर्ने भएका हुन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,४ जेठ, कपिलवस्तु ।
किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरले कृष्णनगर नगरपालिका औरहवा बस्ने २४ वर्षीय राम तिरथ यादवलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।